हिमाल खबरपत्रिका | कहिले हट्ला भारुसँगको भर ?
भारुसँग स्थिर विनिमय आबद्घताबाट निस्कने उपायबारे अहिल्यैदेखि प्रयत्न नगर्ने हो भने नेपाली अर्थव्यवस्थामा भारतीय प्रभाव अनन्तकालसम्म लम्बिने खतरा छ।
विनिमय दर तीव्र गतिमा तलमाथि भइरहनु भनेको मुद्राको जोखिम बढ्नु हो । अहिले भेनेजुयला, अर्जेन्टिना जस्ता मुलुकका मुद्र्रा तीव्र दरमा सस्तो भइरहेका छन् । परिणाम– धेरथोर गरिएका विदेशी लगानी पनि फिर्ता जाने क्रम बढेको छ र ती मुलुकहरूले विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने सामथ्र्य गुमाइरहेका छन् । विश्वबजारमा विनिमय दर धेरै थपघट नहुने मुद्रालाई नै सबैभन्दा सुरक्षित मानिन्छ । अहिले पनि जापानी मुद्रा येनमा लगानी गर्नुलाई ‘सेफ हेभन’ मानिनुमा विनिमय दरको स्थिरता नै कारक हो ।
तर, नेपालको केन्द्रीय ब्यांकलाई भने यो सुविधा छैन । नेपाली रुपैयाँ (नेरु) लाई भारतीय रुपैयाँ (भारु) सँग स्थिर विनिमय दरमा आबद्ध (पेग्ड) गरिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भारुको मूल्यका आधारमा नै नेरुको विनिमय दर तय हुन्छ । त्यसैले डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा सस्तो र महँगो हुनुमा भारु नै जिम्मेवार छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा भएको उच्च वृद्धि र अमेरिकी ऋणपत्र बजारमा प्रतिफल बढेकाले डलर महँगियो, भारु कमजोर भयो र नेरु पनि सस्तो हुनपुग्यो ।
“अन्तिम पटक विनिमय दर परिवर्तन गर्दा मन्त्रिपरिषद्मा भारु १०० बराबर नेरु १४५ देखि १७० सम्म कायम गर्नुपर्ने भन्दै केही प्रस्ताव परेका थिए” नेपाल राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कामु गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धर भन्छन्, “तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘सान्दाइ (बीपी) ले पनि १६० गरेका रहेछन्, अहिले पनि १६० नै गर’ भनेर निर्देशन दिनुभयो ।” बीपी कोइरालाले आफू प्रधानमन्त्री छँदा भारु १०० को विनिमयदर रु.१६० तोकेका थिए । पछि त्यसमा घटबढ हुँदै रु.१६५ कायम भइरहेको बेला सन् १९९३ मा गिरिजाप्रसादले पुनः नेपाली मुद्रालाई रु.५ अधिमूल्यन गरे ।
तर, यसैलाई मात्र आधार मानेर भारुको तुलनामा नेपाली मुद्रा महँगो बनाउन भने मिल्दैन । “अहिलेको अवस्थामा नेपाली मुद्रालाई अधिमूल्यन गर्नु भनेको अर्थतन्त्र नै अर्कालाई बुझउनु हो”, राष्ट्र ब्यांकका उपनिर्देशक गुणराज भट्ट भन्छन् । भारुको सटही दर १६० बाट १५० मा झरेमा मुलुकका उद्योगधन्दा र कृषि उत्पादनहरूले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउने उनको तर्क छ । अर्थविद् पोषराज पाण्डे पनि भारुभन्दा नेरु बलियो हुने अवस्था नआइसकेको बताउँछन् । “मुद्रास्फीतिका आधारमा समयानुकूल विनिमय दर परिमार्जन नगरिंदा अहिले नै नेपाली मुद्राको भाउ चाहिनेभन्दा महँगो छ” पाण्डे भन्छन्, “आफ्नो मुद्रा जबर्जस्ती महँगो बनाएर हामीले भारतलाई व्यापारमा अनावश्यक सुविधा दिइरहेका छौं ।”
भारुसँगको विनिमय दरलाई २५ वर्षसम्म पनि परिवर्तन नगरिंदा भारतलाई नेपालको व्यापारमा हाबी हुने मौका मिलिरहेको अर्थविद् पाण्डेको धारणा छ । “उतिबेला १६० रुपैयाँमा नेपालमा किन्न पाइने कतिपय वस्तु भारतमा भारु १०० मा पनि पाइन्नथ्यो । त्यसकारण हामीलाई तुलनात्मक लाभ थियो । तर, त्यसयता लगातार उताभन्दा यतै मूल्यवृद्धि धेरै भइसकेको छ” उनी भन्छन्, “यसले नेपाली उत्पादन भन्दा भारतीय उत्पादन सस्तो भएर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको छ ।”
सरकारका पूर्व सचिव तथा व्यापार विज्ञ पुरुषोत्तम ओझ भने राम्रोसँग अध्ययन गरी उचित निर्णय लिनसके नेरुको अवमूल्यनबाट लामो समयसम्म लाभ पाउन सकिने सम्भावना देख्छन् । आयात घटाउन नसकिए अर्थतन्त्र नै धरासायी हुने दिशातर्फ उन्मुख भएकाले पनि मुद्राको अवमूल्यन गर्ने बेला आइसकेको ओझ बताउँछन् । उनी भन्छन्, “पेट्रोलियम, खाद्यान्न तथा मासुको आयात घटाउन सरकारले तत्काल ठूला योजना पनि अघि सार्नुपर्छ ।”
स्रोतका अनुसार, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा गभर्नर छँदा आफ्नो कार्यकालको अन्त्य (२०७१) तिर भारुसँगको विनिमय दर पुनरावलोकनको प्रयास गरेका थिए । “उहाँ (खतिवडा) ले यसबारे छलफल समेत चलाउनुभएको थियो, तर निर्णय हुनै सकेन”, राष्ट्र ब्यांककै एक अधिकारी भन्छन् । त्यसो त केन्द्रीय ब्यांकको अनुसन्धान विभागमा हुँदादेखि नै खतिवडा भारुसँगको विनिमय दर परिमार्जन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको उनका सहकर्मीहरू बताउँछन् । “तर, पछि गभर्नर भएपछि उनैले पनि विनिमय दर चलाउने आँट गरेनन्”, मानन्धर भन्छन् ।
हालका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले विनिमय बजारबारे नीतिगत निर्णय गर्न सक्लान् भन्नेमा ब्यांककै अधिकारीहरू आशंका व्यक्त गर्छन् । भारतले पुराना १००० र ५०० दरका भारु नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि औपचारिक पत्र बेगर नै नेपालमा ती दरका भारुको कारोबार रोक्न राष्ट्र ब्यांकले निर्देशन जारी गरेको थियो । बरु, भूटानको केन्द्रीय ब्यांकले निश्चित सीमासम्म भारु साट्न सर्वसाधारणलाई आह्वान गर्‍यो । भारु प्रतिबन्धले नेपालीलाई परेको समस्या सल्ट्याउन राष्ट्र ब्यांक पूर्णतः असफल देखियो । यतिसम्म कि, भारुको विमौद्रिकीकरणबाट नेपालले कुन हदसम्म क्षति बेहोर्नु पर्‍यो भन्ने अध्ययन समेत भएको छैन ।
भारत, नेपालको दुईतिहाइ व्यापार साझेदार मात्र होइन, नेपालमा मूल्य वृद्धि गराउनमा पनि उसको भूमिका अहम् हुने गर्छ । हाम्रो तुलनामा भारतीय केन्द्रीय ब्यांक बढी स्वायत्त र उत्तरदायी भएको राष्ट्र ब्यांककै अधिकारीहरू बताउँछन् । रिजर्भ ब्यांक अफ इण्डियाले ६ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्रास्फीति भयो भने ‘व्याजदरमा हस्तक्षेप गर्छु’ भनेको छ । त्यसको सीधा असर नेपालमा पर्छ । यिनै कारणले पनि नेपाललाई तत्काल भारुसँगको आबद्धता त्याग्न सहज नभएको बताइन्छ । कतिपयको भने नेपाल र भारतबीच खुला सीमा बन्द नगरिएसम्म विनियम दरको आबद्धता अन्त्य गर्न असम्भव रहेको दृष्टिकोण छ ।
त्यसपछिको काम भनेको पूँजी खातालाई परिवत्र्य बनाउने हो । अहिले पनि नेपालले सीमित क्षेत्रमा मात्र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी खुला गरेको छ । पूँजी खातालाई परिवर्तनीय बनाएपछि पूँजी लगानीलाई नेपाल भित्र्याउन र बाहिर लैजान खुला हुन्छ । त्यसपछि मात्रै विदेशमा नेपाली मुद्राको माग हुन थाल्छ र यसले आफ्नो मूल्य निर्धारण गर्छ । हाल नेपालमा विदेशी मुद्राको स्रोत रेमिटेन्समा निर्भर छ । “रेमिटेन्सबाट भन्दा निर्यात र पर्यटनबाट बढी विदेशी मुद्रा आर्जनको अवस्था नआएसम्म भारुसँगको आबद्धता हटाउन सम्भव छैन”, भट्ट भन्छन् ।